Ny làlamben'ny filoham-pirenen'i Reunion dia mijanona ho tetikasan'ny nosy amin'ity taonjato ity
Home » Vaovao momba ny fitaterana » Ny làlamben'ny filoham-pirenen'i Reunion dia mijanona ho tetikasan'ny nosy amin'ity taonjato ity
Nilaza i Ilodrones tamin'ny lahatsorany vao haingana fa tsy ho ela dia hanatevin-daharana an'i St. Denis ny làlana morontsiraka vaovao.
Ny fanavaozana vao haingana nataon'i Ilodrones tao amin'ny media sosialy dia nampiseho tamin'ny fanavaozana an'izao tontolo izao ny lalana amoron-dranomasina vaovao ao amin'ny Nosy Réunion. Ilay tetikasa nomen'izao tontolo izao ny làlambe hoe "làlambe Didier Robert" any La Réunion dia mijanona ho tetikasan'ny taonjato ho an'ny nosy.
Nilaza i Ilodrones tamin'ny lahatsorany vao haingana fa tsy ho ela dia hanatevin-daharana an'i St. Denis ny làlana morontsiraka vaovao ary ny sisa tavela hitranga dia ny telo amin'ireo asa fanaovana pilina. "Mandeha haingana dia haingana ny làlana" hoy i Ilodrones.
Hanova ny fiainan'ny Reunionais ho lasa tsara io lalambe vaovao io. Ny andro tsy maintsy nikatona ny làlana amoron-dranomasina noho ny oram-be dia vita ary ny fanidiana dia nanakorontana ny fiainan'ny Reunionais rehetra. Ny làlambe vaovao an-dàlam-panamboarana any an-dranomasina dia hiasa mandritra ny 365 andro amin'ny taona ary hita ho sangan'asa iray ary iray amin'ireo làlambe lafo indrindra ataon'i Eropa.
Ny filoha Didier Robert, ny filohan'ny Filankevi-paritry ny Réunion no nijoro nanohana an'ity tetik'asa ity na iza na iza. Nino izy fa io làlambe vaovao io dia tena ilain'ny mponina ao amin'ny Nosy La Réunion ary nanao fampielezan-kevitra ho an'ilay tetik'asa izy izay lasa zava-misy ankehitriny.
Jamaica Global Resilience Center dia manome fanampiana aorian'ny tsunami tany Indonezia
Misafotofoto ny fifamoivoizana any Roma manohitra ny lalàna vaovao momba ny bus bus mpizahatany